Ogaden News Agency (ONA) – Kenya oo Soomaaliya Ugu Hanjabaysa Cunaqabatayn.
Kenya oo Soomaaliya Ugu Hanjabaysa Cunaqabatayn.
Wasiirada Arrimaha Dibada ee dalka Kenya Monica Juma oo xalay shir jaraa’iid ku qabatay magaalada Nairobi ayaa sheegtay in ay ka sugayaan dowlada Federaalka Soomaaliya “Raali-gelin”.
Wasiirada ayaa ku dooday in Wadanka Kenya uusan tilaabo dhulkooda kamid ah uusan marnaba uga tanaasuleyn dal kale, waxayna intaasi raacisay in ay dhankooda si weyn isu xakameeyeen, waa siday hadalka u dhigtayee.
Monica Juma ayaa dhinaca kale ka dhawaajisay in ay dhici karto in dowlada Kenya cunaqabateyn saarto Soomaaliya, arrintaasi bay tiri waxay ku xirnaan doontaa jawaabta uga timaada dhinaca Soomaaliya.
Dowlada Kenya ayaa u muuqata inay hadalkeeda sii adkeysay kadib jawaabtii diblumaasiga ahayd ee uga timid Dowlada Soomaaliya, mana cada raali gelinta ay rabaa nooca ay tahay, mar hadiiba dalka Soomaaliya sheegay inaysan waxna ka jirin doodii Kenya ee ahayd in la xaraashay qeybo kamid ah biyaha ay labada dal isku heystaan oo ay hada dacwadooda taalo Maxkamada Caalamiga ah ICJ.
Dowlada Soomaaliya ayaa sheegtay in goobaha sahminta lagu sameeyey ee xogtooda lagu soo bandhigay shirkii London ka dhacay 7dii bishan aysan ku jirin biyaha xaduuda ay labada dal isku heystaan, balse ay ku kooban tahay oo kaliya biyaha aan murranka ku jirin ee Soomaaliya. Waxaa sidaa oo kale sheegtay shirkada sahminta sameysay ee Specterum oo iyaguna warsaxafadeeda arrintan kasoo saaray.